कोइराला परिवारबीच भेटवार्ता, महाधिवेशनमा एकढिक्का भएर जाने समझदारी - Texas Nepal News - Texas Nepal News
कोइराला परिवारबीच भेटवार्ता, महाधिवेशनमा एकढिक्का भएर जाने समझदारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ तीन नेता नेताहरुबीच भेटवार्ता भएको छ । पार्टी महाधिवेशनको संघारमा रहेको बेला कोइराला परिवारका तीन वरिष्ठ नेताहरुबीच भेटवार्ता भएको हो । कांग्रेसका महामन्त्री डा. संशाक, नेता शेखर र नेतृ सुजाता कोइरालाबीच आज भेटवार्ता भएको हो ।
भेटवार्ता नितान्त पारिवारिक भएको संशाक कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारीले जानकारी दिनु भयो । तिवारीका अनुसार भेटघाटको अवसरमा नजिकिंदै गरेको महाधिवेशन, नेतृत्व तथा सरकारलगायतका राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ ।
पार्टीलाई एकजुट बनाएर लग्ने र भेटघाटलाई बाक्लो बनाउने पनि उहाँहरुबीच समझदारी भएको छ । साथै अबको पार्टी महाधिवेशनमा एकढिक्का भएर जाने, त्यसको नेतृत्व कोइराला परिवारले नै गर्नुपर्नेमा पनि एकमत देखिनु भएको छ । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको र पार्टी महाधिवेशन नजिकिंदै गर्दा भएको यो भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
जब टेक्ससमा डा. मुरली अधिकारी भाबुक बने..
बादललाई पराजित गर्दै कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका देवकोटा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित
कोरोनाको कहरमा कॉंग्रेस
राष्ट्रपतिद्धारा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान
एनआरएनए मकाउ र विप्स ल एसोसिएट्सबीच द्विपक्षीय सम्झौता
राजन त्रिपाठीको पहलमा कोष्टारिकामा एनआरएनएको नयाँ शाखा गठन, अध्यक्षमा डा खगेन्द्र चापागाईं